August 20, 2012 - Written by Waxaa dhawaan la keenay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dhamaan xilibaanada Dowllada cusub ee beesha caalamku u dhisi doonto Soomaaliya, xilibaanada ayaa dhamaan loo qaybiyey kaararka aqoonsiga ilaa hadda Xilibaanada kaararka la siiyey ayaa gaaray 225 xilibaan. Kulanka dhaarinta ayaa waxaa la filayey in uu ka dhaco Xarunta Iskuulka Buluusiyey ee magaalada Muqdisho balse waa laga soo weeciyey arrinkaas oo lagu sababaynayo arrimaha dhinac amaanka , Madaxda DFS ayaa la filayaa in ay dhamaantood yimaadaan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan Xaflada lagu dhaarinta Xilibaanada cusub.
Kulan saaka ku dhexmaray Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde madaxweynaha xiligiisa dhamaaday ee Sh Shariif Sh.Axmed iyo Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Augustine Mahiga kulankaas oo looga hadlay xilibaanada cusub ee uu madax wey nuhu soo jeediyey in wax laga bedelo lana kala diro arrinkaas oo uu diiday Augustine Mahiga. Ilaa hadda lama yaqaan meesha xalku ku dhamaan doono balse waxaa muuqata in madax weyne Sh.Shariif Sheekh Axmed uu ku dadaalayo in uu xilibaanada ka dhex arko taageerayaashii Maxkamada Islaamiga iyo ururkii dib u xoraynta oo markii horeba uu Madaxweynuhu iska fogeeyey.
Madaxweynaha xilikiisa dhamaaday Sh Shariif S Axmed , Raiisul Wasaare Gaas , guddoomiaya Baarlamaanka Shariif Xassan ,Mahiga ayaa soo gaaray Garoonka Aadan Cadde si ay uga qayb galaan dhaarinta Xilibaanada cusub ee dowllada ay doonayso beesha caalamka in ay u dhisto Soomaaliya, Dhaarta Xilibaanada cusub ayaa hadda si toos ah u bilaabatay waxaan ilaa hadda la dhaariyey Beelaha Dir, Digil iyo Mirif , Beelaha Shanaad.